विवाह गर्न चाहन्छन् धवन - बलिउड - साप्ताहिक
बलिउड अभिनेता वरुण धवन आफ्नो जीवनप्रति निकै गम्भीर छन् । हालै धवनका सम्बन्धमा एउटा खबर बाहिरिएको छ । यी लोकप्रिय अभिनेता केही समयदेखि नताशा दलालसँगको प्रेम सम्बन्धमा छन् र उनैसँग विवाह गर्न चाहन्छन् ।
स्रोतका अनुसार उनले यही वर्षको अन्तिमसम्ममा विवाह गर्ने सम्भावना छ । वरुणको परिवार विवाहको गुपचुप तयारीमा समेत जुटिसकेको बताइन्छ । विवाहपछि वरुण र नताशा परिवारसँग छुट्टिएर बस्ने समेत समाचारमा उल्लेख छ ।
वरुणले केही समयअघि मात्र आफ्ना लागि एउटा घर किनेका छन् । यो पनि हुन सक्छ, वरुणले चाँडै बलिउडमा फैलिएको यो हल्लाका बारेमा टिप्पणी गरून् ।
दोस्रो पटक हनिमुन माघ ७, २०७५
दिशा पाटनीको चमक माघ ६, २०७५
विश्वकै नम्बर वान अभिनेता माघ २, २०७५
क–कसको हुँदैछ विवाह ? पुस ३०, २०७५
मोदीको जीवनीमा चलचित्र पुस २९, २०७५
निकिता रावको ग्ल्यामर पुस २८, २०७५
बलिउड प्रवेश गर्दै प्रभास पुस २७, २०७५
२६ वर्ष, २४ फ्लप पुस २६, २०७५
वर्ष २०१९ : बलिउडको सम्भावना पुस २३, २०७५
चलचित्रबाट सुटुक्क आउट ! पुस २२, २०७५